Falanqaynta Websaydhka Gujiska ah ayaa mar kale sameeya! | Martech Zone
Sabtida, Juun 21, 2007 Sabtida, Juun 21, 2007 Douglas Karr
Falanqaynta Websaydhka Riix ayaa ku soo jiiday muuqaal kale oo weyn!
Kani waa web Analytics xirmo si dhakhso leh u noqonaysa xirmada ugu wanaagsan ee aan arkay - gaar ahaan loogu talagalay qorayaasha wax qora iyo kuwa wax ku daabaca webka. Dashboard-ka wuxuu waligiis heystaa mitir muhiim ah oo waxtar leh - dhammaantoodna waxay ka yimaadeen hal bog.
Waa kuwan Dashboardka Cusub:
Jul 21, 2007 markay tahay 9:17 PM
Miyaad raaceysay faallooyinka boggooda blog ee ku saabsan Doug? .. qaar kali maahan kuwa ku faraxsan waxaas… waxaa loo sameeyay qaar madadaalo galabnimadii Sabtida akhriska LOL
Jul 21, 2007 markay tahay 9:31 PM
Waxaan hayaa, Steve. Kama nixin Maamule Badeecad ahaan, waxaan u arkaa falcelintan markasta oo aan 'hagaajino' wax soo saar ama sii deyno muuqaal cusub. Xaqiiqdu waxay tahay, dadku ma jecla isbedelka. Xitaa hadday horumar tahay.
Waa kan qoraalka xiisaha leh: isbeddelada ma aysan saarin wax kasta oo shaqeynta! Waxay si fudud ku daray more!
Jul 23, 2007 markay tahay 3:18 PM
Waxaan bilaabay isticmaalka Clicky toddobaadyo ka hor, aadna waan ugu faraxsanahay arrintaas!
Aad ayey ugafiicantahay Google Analytics 🙂
Oktoobar 24, 2007 at 12:47 PM
Ma jiraa qof kale oo dareemay xog kala duwan oo ay soo celinayaan Clicky iyo Google Analytics oo dhinac dhinac ah baaritaanka? Waxaan leenahay degel macaamiil ah oo Clicky dhowaan lagu rakibay waxayna muujineysaa xog aad uga duwan Google. Tusaale ahaan, hal maalin Google waxay muujisay 18 qof oo soo booqdayaal u gaar ah, iyo Clicky wuxuu muujiyay 48 isla maalintaas, tanina ma aha wax hal mar dhaca. Maaddaama ay aad ugu dhowdahay in xirmo hal falanqeyn ah aysan soo gudbin doonin xogta marka loo eego mid kale oo abuuri lahaa xog macmal ah, waa inaan u maleynayaa in Clicky uu hayo xogta saxda ah laakiin ma ogaan karo sababta ay u kala duwan yihiin.
Oktoobar 25, 2007 at 11:03 AM
Josh, ka waran lambarada kale, sida booqashooyinka iyo ficillada, kuwaasi miyay isku dhowyihiin? Booqdeyaashayada gaarka ah waxaa lagu xisaabiyaa cinwaanka IP-ga hadda. In kasta oo ay suurtagal tahay in si sax ah looga dhigo buskudyada iyo wixii aan ahayn, sida barnaamijyada kale qaarkood sameeyaan, ma jirto hab lagu hubiyo oo lagu helo 100% sax ah. (Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa joojiya cookies, iwm).
Waxaan aaminsanahay tayada wax soo saarkayga, laakiin haddii wax uun aan xiiseeyo in lambarada Google ay ka saxsan yihiin annaga. Waxay haystaan ​​tobanaan kun oo adeegeyaal ah oo ku shaqeeya falanqaynta, oo loo qaybiyay adduunka oo idil. Halka aan nahay kaliya shirkad yar oo leh ilaa 10 server, dhammaantoodna ku yaal hal meel gudaha Mareykanka. Way adagtahay in lala tartamo taas, bilaa balaayiin baananka ah.